Okpokoro Silicone na-eguzogide ọgwụ na-ekpuchi ákwà mkpuchi gị
Nkọwa:Chee ihe mkpuchi uhie gị,16 Mkpuchi Inch Steering Wheel Covers,Mkpuchi Uwe Mkpuchi 16inch
Home > Ngwaahịa > Ekpuchi Uwe Nkwado Silicone > Okpokoro Silicone na-eguzogide ọgwụ na-ekpuchi ákwà mkpuchi gị
Ihe Nlereanya.: SWC1803
Nkwakọ ngwaahịa: nke ọ bụla n'ime akpa ọkpụkpụ, ma ọ bụ ihe nkwụnye igbe
Ubu oke: 10000pcs one week
Akwụkwọ: FAD and SGS
Okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ na-ekpo ọkụ nke kpụ ọkụ n'ọnụ Ekee ihe mkpuchi nkuzi gị bụ 100% nri mkpụrụ silicone, n'ihi ya, ọ bụ okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ. A na -ebipụta ụdị ihe ọ bụla a na-etinye na mkpuchi ikpo ígwè nke Silicone . Ya mere, OEM ma ọ bụ ODM na-anabata. Anyị nwekwara ike ime nke a maka gị. Na silicone n'iru wheel cover nwere ike na-asa mgbe ọ bụ unyi, n'ihi ya, ọ bụ imegharị ihe maka iji. 16 inch steering wheel covers ọ bụghị nanị na ime ka ụgbọ ala gị mara mma, ka ị hụ ya n'anya nke ukwuu, ma nwekwara ike iji ya mee ihe maka ọtụtụ ụgbọala. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ma ọ bụ mkpuchi wheel , ị nwere ike ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ anyị.
Igwe mkpuchi uhie ụkwụ na-acha ezigbo mma, nke dị n'ime ya dị mma, ya mere ọ ga-aka mma maka ichebe ụgbọelu ụgbọ ala. Ọ dịkwa ezigbo mma.
Agba nwere agba nkịtị, nwekwara ike inye Pantone agba. N'afọ 2018, anyị mepụtara ụfọdụ àgwà dị mma, na-ebipụta akwụkwọ mara mma na mkpuchi ụkwụ. Ya mere ọ bụrụ na ị nwere mkpa ọ bụla, anyị nwere ike imere gị.
Banyere mkpuchi mkpuchi ịkwọ ụgbọala , anyị enweela ụzọ abụọ nkwụsị, otu bụ akpa ọkpụkpụ, nke ọzọ bụ igbe dị iche iche.
Banyere ụlọ ọrụ anyị na-ewepụta dị ka ndị na-esonụ:
1. ajụjụ nile si n'aka onye ahịa ga-aza site n'aka onye ọrụ.
2. Anyị na-enweta ngalaba mmepụta, nwere ike ịmepụta onwe onye.
3. Anyị bụ ụlọ mmepụta ihe n'ezie, nwere ike inye gị ọnụahịa kacha mma maka mmepụta niile.
4. Anyị na-enweta ọtụtụ ngwá ọrụ dị elu maka ngwaahịa.
5. ndị ọrụ niile a zụrụ nke ọma tupu ha ebute ngwaahịa ahụ.
6. Anyị ga-enweta ụlọ ọrụ QC kacha mma maka mmepụta niile.
7. anyị bụ ọkachamara na ngwaahịa ndị a maka ihe karịrị afọ 10.
8. Ngwaahịa niile nwere ike ibị ngwa ngwa.
9. ihe niile nwere ike ịgafe CE, ROHS, PAHS na nyocha ọ bụla ọzọ.
Ngwaahịa : Ekpuchi Uwe Nkwado Silicone
Ọkaaka mkpuchi ụgbọ ala 13 nke anụ ọhịa Kpọtụrụ ugbu a
14 ihe igwe na-ekpuchi ugbo ugbua Kpọtụrụ ugbu a
Ọhụụ ọhụrụ nwere ike ịchọta ihe mkpuchi ọhụụ ọhụrụ Kpọtụrụ ugbu a
Uwe mkpuchi ụgbọ ala na-acha odo odo Kpọtụrụ ugbu a
38cm diameter baseball coaches steering wheel cover Kpọtụrụ ugbu a
Okpokoro Silicone na-eguzogide ọgwụ na-ekpuchi ákwà mkpuchi gị Kpọtụrụ ugbu a
Silikel na-agbagharị ụgbọ elu ụgbọ ala maka ụgbọ ala Kpọtụrụ ugbu a
Nnukwu ụlọ ahịa ịzụ ahịa na-ekpuchi ihu igwe Kpọtụrụ ugbu a
Chee ihe mkpuchi uhie gị 16 Mkpuchi Inch Steering Wheel Covers Mkpuchi Uwe Mkpuchi 16inch Obere mkpuchi mkpuchi uhie Mpeepe Mkpuchi Kpuchie Ngwa Mpeepe mkpuchi mkpuchi nke mwepụ Obere igwe ubochi uhie Ihe mkpuchi Vw dị mma